Shina Lid sy boaty fonosana ambany ambany ho an'ny mpanamboatra lamba na mpanamboatra fitafiana | Fanontana fahalalana
Anaran'ny vokatra: fonosana sy boaty fonosana ambany ho an'ny fofona na akanjo
Refy ivelany: 26x13x6.2cm
Refy anatiny: 25.5 × 12.5x 5.7cm
Fitaovana: tabila-mena 2mm nofonosina misy soratra vita tamin'ny 157g
Loko: fotsy, fanao
Asa tanana: fanaingoana mafana, famonosam-bolo matte
Seranan-tsambo FOB: Qingdao, Tianjin, Shanghai, sns
MOQ: 100pcs ho an'ny filaharana mahazatra
Qingdao Knowledge Printing dia mpanamboatra boaty ao Qingdao, CHINA. Miaraka amin'ny traikefa famokarana manankarena mihoatra ny 16000 mahery, afaka manolotra vidiny mora kokoa, kalitao ary boaty boaty misafidy kokoa isika. Ny baoritra mena dia mahatonga ity boaty ity ho tsara tarehy kokoa, ka maro ny mpanjifa no tia azy.
Famolavolana → fanamboarana → pirinty → lamination sarimihetsika → gluing → maty fanapahana → fanaraha-maso kalitao → fonosana → fandefasana
Gazety fanaovan-gazety milina sy ekipa miasa efa za-draharaha.
Ny fifehezana kalitao avy amin'ny fisafidianana fitaovana, ny fitiliana milina mialoha ny famokarana hatramin'ny vokatra vita.
Miatrika fanandramana mandritra ny taona maro, ny ekipa matihanina dia afaka mamaly ny fanontanianao ara-potoana.
Ny vokatrao rehetra dia azo namboarina namboarina. Izay SIZE, endriny, endrika endrika, marika dia mety mahafeno ny zavatra takianao, vitantsika ny manao ny zavatra rehetra.
Afaka manome serivisy fananganana maimaim-poana izahay. Formatan'ny zavakanto: PDF, INDESIGN, AI
(1) Maimaimpoana ny santionany misy.
(2) vidiny modely hotanterahina ireo santionany namboarina, izay haverina avy amin'ny famokarana faobe.
(3) ny fotoam-pialana santionany dia 3-5 andro.
4. Ny tombotsoantsika
(1) vidiny mifaninana
(2) hetsika haingana amin'ny santionany
(3) <24 ora valiny haingana.
Q1: manana entana isan-karazany amidy ve ianao?
Ny vokatra rehetra dia novolavolaina sy namboarina arakaraka ny fitakian'ny mpanjifanay. Vitsy ny manana tahiry.
Q2: mpanamboatra ve ianao?
Eny, manana ny orinasa izahay ary efa nanome vahaolana matihanina tamin'ny indostrian'ny fanontana sy ny fonosana nandritra ny 16 taona mahery.
Q3:Inona ny habetsaky ny kaontinao?
Matetika ny MOQ dia 500 pcs, na dia indraindray mamokatra latsaky ny 500 pcs aza izahay indraindray. Saingy, ny saran'ny fandaharana kely dia toa tena avo be rehefa raisina ny fanaovana ny fanaovana pirinty, ny fanontana, ny fanamboarana ny fitaovana ary ny fanamboarana.
Q4: ahoana no fomba hahazoana santionany hanamarina ny kalitao?
Aorian'ny fanamafisana ny vidiny dia azonao atao ny mangataka santionana hanamarina ny kalitao. Maimaim-poana amin'ny santionany tsy misy ohatra hanamarina ny famolavolana sy ny kalitaon'ny taratasy, fa tsy maintsy mandoa ny fandefasana ianao.
Ho an'ny famokarana santionany, hanomezanay usd30-100 izahay handrakofana ny vidin'ny fitifirana sy fanontana. Ny vidiny farany dia hohamarinina arakaraka ny fizotran'ny fizotran'nyvokatra.
Q5: inona no vaovao tokony holazaiko aminao raha te hahazo tolotra aho?
2) refy famaritana (halavany × sakany × ny ambony)
3) ny fikarakarana ara-materialy sy ny tany
4) loko fanontana
5) raha azo atao dia omeo sary na fikaody famolavolana. Ny santionany no ho hazavaina tsara indrindra, raha tsy izany dia atolotray ny antsipiriany momba ny vokatra ilaina ho fanondroana.
Q6: rahoviana aho no mahazo ny vidiny?
Matetika izahay dia afaka manonona ao anatin'ny 24 ora aorian'ny mahazo ny fanontanianao. Raha manery an'io vidiny io ianao dia antsoy izahay na ampahafantaro anay ao amin'ny mailaka fa ho laharam-pahamehana ny fanontanianao ianao.
Q 7: rehefa mamorona zavakanto isika dia endrika inona no azo ampiasaina amin'ny fanaovana pirinty?
1) endrika malaza PDF, CDR, AI, PSD
2) nivadika: 3-5mm
Q8:Andro firy no ho vita ny santionany namboarina? Ahoana ny famokarana faobe?
Amin'ny ankapobeny 3-5 andro fiasana dia raisina ho an'ny famokarana santionany.
Mandritra ny fotoam-pamokarana faobe, marina, miankina amin'ny "filaminana" ary ny "vanim-potoana", ary ny toerana misy anao dia "filaharana". Manoro hevitra izahay ny hanombohanao ny fanontanianao roa volana mialoha ny daty fanombohana mba hahazoana entana ao amin'ny firenenao.
Q9:Efa efa nandinika ilay vokatra vita ve ianao?
Eny, ny vokatrao rehetra dia handalo ny fomba fanaraha-maso kalitao.
Q10:Ahoana ny fomba andefasanao ny vokatra vita?
1) ny ranomasina
3) amin'ny alàlan'ny DHL, FedEx, UPS, TNT, sns.
Previous: Pobaka Fotsy fotsy fotsy hoditra miaraka amin'ny boribory sy Satin
Manaraka: Kitapo ny akanjo baoritra miakanjo miaraka amin'ireo magnets